I-Tomah Retreat, i-CHILL eneBhafu, iSauna kunye neFireplace kufuphi neBotanic Gardens
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguBronwen
Kukho iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zee-BnB ezirentisayo eTomah Retreat - zonke zinokufikelela kwisauna yasimahla engaphandle ye-infrared, iindawo zazo zokucima umlilo zangaphakathi, iindawo zokucima umlilo zangaphandle, i-microwave, i-hotplate, umatshini wekofu kunye nokuzenzela isidlo sakusasa.
ULWAZI OLUNYE NGESTUDIO CHILL (irenti 1):
123I-boudoir entle enomandlalo we-Ergo Flex oyinkosi ebonakala kwiikhethini zebhafu yonyawo lwakho kunye neziko. Incanyathiselwe kwindlu enkulu kunye nomnyango wayo wabucala, i-CHILL ligumbi ofuna ukuchitha ixesha kunye nalo xa ufuna ukubaleka kuyo yonke. Ukusuka ebhedini yakho ujonge phandle ngeekhethini zegauze kwibhafu yonyawo lwakho apho ufika kwibhafu yesiFrentshi apho unokuhlambela ebhafini yakho ngombhobho weshawari ophathwa ngesandla orhangqwe zizivalo zamaplanga ukwenza indawo yabucala etofotofo. Ibandakanya eyakho indawo yomlilo, itoaster, umatshini wekofu, imicrowave, ipleyiti eshushu kunye neqanda elingekho mthethweni. Kwaye ungalibali ukuba ufumana imizuzu engama-45 yesauna ye-infrared yasimahla emi-2 ngosuku ngalunye lokuhlala kwakho.
Ikwafumaneka: Unyango lweReiki, iiklasi zokucamngca OKANYE ufunde nje, ulale, ukhwele i-treehouse, thatha i-sauna yasimahla okanye uhambe nge-labyrinth. Iimfumba zamagumbi anobhukisho oluncinci lwabantu aba-2.
I-Tomah Retreat yindawo enqabileyo yokubuyela kwiihektare ezi-5 kwiiNtaba zeBlue apho ekuphela kwento efuywayo yimifuno enodoli omkhulu wothando kunye novelwano - apha izilwanyana zihamba zikhululekile.
I-Tomah Retreat ibe sisiseko seNdlu ye-International House yeReiki kunye neeklasi zokucamngca ukususela ngo-2002 kwaye iyaqhubeka injalo. Xa ingaxakekanga ngaloo nto, idala indawo yokuphilisa abantu, kunye nezibini ezijonge ukubaleka kwilizwe elixakekileyo. Ngamanye amazwi - WENA.
I-Tomah Retreat ikwalikhaya lokuphilisa izilwanyana ezininzi ezisuka kwimvelaphi yokuhlangula.
Kukho iindawo ezi-2 zezibini ezingakumbi kwipropathi RELAX kunye ne-BREATHE onokuthi uyibhukishe ukuze wenze indawo yokubuyela kubahlobo bakho kunye/okanye nosapho.
UBronwen uye wahlanganisa inani lamava akhethekileyo onokuwonwabela xa uhlala eTomah Retreat. I-Bronwen iya kubonelela ngokukodwa olu nyango okanye iiklasi kwiimfuno zakho.
Ukubhukisha kubalulekile kwaye kunokwenziwa apha "Tomah Retreat dot com".
Unokongeza i-weber Baby Q BBQ kutyelelo lwakho. I-$ 40 nje ngotyelelo lokurenta kwaye ibandakanya ibhotile yegesi.
Chitha iyure okanye ezimbini kuHamba oluthandekayo lwaseKhaya uphume uye kwingxondorha e-Pierces Pass off the Bells Line of Rd.
Ndwendwela iiMarike zakusasa zangoMgqibelo kwiholo yaseBilpin. Abahlali badibana ukuze bancokole ngekomityi kwaye bathengise iziqhulo ezimbalwa. Isiganeko esisisiseko esisezantsi esiqhelekileyo sokubekelwa umva kwentaba.
Yonwabela ukuHamba okuKhokelwayo simahla kwiiGadi zeBhotani, kumgama nje oziimitha ezingama-500. Eminye imisebenzi yeqela nayo inokuququzelelwa kunye neeGadi zeBotanical kubandakanywa nokuhamba nabantu bomthonyama bengingqi. Iintlawulo ezahlukeneyo ziyasebenza.
Fumanisa ukuba zeziphi iziqhamo kunye namandongomane ngamaxesha onyaka kwaye ukuba kukho nawaphi na amathuba okuvuna kwindawo leyo. Uhlawula oko ukhethayo kwaye oku kunokubandakanya i-walnuts, ii-apile, amajikijolo, i-cherries, iipesika, ii-nashies kunye nokunye.
Iicanyoners ezinamava ziya kuba nemincili kakhulu ukwazi ukuba iTomah Retreat isecaleni komnyango omangalisayo weClaustral Canyon.
Umbuki zindwendwe ngu- Bronwen
I live in the beautiful Blue Mountains with lots of animals including a pet pig and mini horses. I'm vegetarian and enjoy cooking all sorts of food.
Olu ayilohlobo lwendawo apho, xa ufika, kufuneka ukhangele malunga nesitshixo phantsi kwemethi. Oh hayi!
Apha kwi-Tomah Retreat, u-Bronwen Logan, umninimzi wakho, wenza zonke iinzame zokukubulisa njengoko ufika kwaye unikeze yonke into oyifunayo ukuyazi, ukwazisa kuFlora ihagu kunye nezilwanyana zakhe zezilwanyana, zibonise umnyango we-labyrinth, ikwazise ukuba zeziphi iziqhamo okanye amandongomane akwiXesha loNyaka, kwaye uchaze indlela yokubeka umlilo eziko kunye nendlela yokubhukisha ukuze ufumane unyango olukhethekileyo okanye iklasi yokucamngca.
I-Bronwen, nangona kunjalo, ayiyi kuba sebusweni bakho. Indlu yakhe kwipropati ibucala, kodwa unokuhlala efikeleleka ngetekisi okanye ngefowuni kwaye uya kuba khona ngokukhawuleza ukuba uyamfuna.
Apha kwi-Tomah Retreat, u-Bronwen Logan, umninimzi wakho, wenza…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-1870-1